पक्राउ पर्नबाट बच्न र पैसा लुट्न साइबर अपराधीहरूले खोजेको नयाँ दाउ – Pahilo Page
पक्राउ पर्नबाट बच्न र पैसा लुट्न साइबर अपराधीहरूले खोजेको नयाँ दाउ
२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार ११:५७ 337 पटक हेरिएको
काठमाडौं । ‘पैसालाई पछ्याऊ’ अपराधीहरू पत्ता लगाउन अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि यो धेरै पुरानो जुक्ति हो। साइबर क्षेत्रमा पनि अधिकारीहरू र अपराधीबीच यस्तो लडाइँ वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको प्रकृति अज्ञात भए पनि विगत दुई वर्षमा त्यसैसँग सम्बन्धित दर्जनौँ साइबर अपराधीहरू पक्राउ परेका छन्।
त्यो क्रिप्टोकरेन्सी ब्लकचेनभरि भएका उनीहरूका रकमलाई पत्ता लगाउने नयाँ तरिकाका कारण सम्भव भएको हो। डार्कनेटमा एउटा नयाँ सेवा सुरु गरिएको छ जसले अपराधीहरूलाई उनीहरूको डिजिटल पैसा कति “वैध” छन् भन्ने जाँच गर्ने सुविधा दिन्छ।
“हामीले ब्लकचेन एनलिटिक्सविरुद्ध आक्रमण गर्न थालेको देखिरहेका छौँ र यो पहिलो त्यस्तो सेवा हो,” विश्लेषण सेवा प्रदायक इलिप्टिकका प्रमुख वैज्ञानिक डा. टम रबिन्सनले भने। उनले नै उक्त वेबसाइट पत्ता लगाएका हुन्।
“यसलाई एन्टिएनलिसिस भनिन्छ र तीन डलरमा अपराधीहरूले आफ्नै बिटकोइन वालेटहरू कुनै आपराधिक गतिविधिका नाममा अधिकारीहरूले निगरानीमा राख्न सक्छन् कि राख्न सक्दैनन् भनेर हेर्न सक्छन्,” डा. रबिन्सनले भने।
इलिप्टिकले उक्त कुरा पत्ता लागाएपछि साइबर-अपराध सञ्जाल कति परिष्कृत बनिरहेका छन् र उनीहरू पक्राउ पर्ने चिन्तामा कति छन् भन्ने देखाएको बताएको छ।
“यो निकै राम्रो उपाय हो। यदि तपाईँको रकम शुद्ध छैन भने तपाईँले आफ्नो रकमलाई शुद्ध नपारुन्जेल सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न उक्त सञ्जाललाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने।
रबिन्सनका अनुसार उक्त प्रणालीले नयाँ ट्रेन्डबारे चासो राखिरहेको छ जसले गर्दा उनीहरूको काम होस् र कानुन कार्यान्वयन थप कठिन होस्।
तर संयोगवश त्यसलाई परीक्षण गर्ने उनका अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएअनुसार त्यो प्रणालीले अहिले राम्ररी काम गरिरहेको छैन।
“वास्तवमा आपराधिक साइटहरूको पहिचान गर्नका निम्ति यो धेरै राम्रो थिएन। यद्यपि समयानुसार यसमा अवश्य सुधार हुनेछ। त्यसैले मलाई लाग्छ भविष्यमा यो अपराधीहरू र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्नहरूका निम्ति महत्त्वपूर्ण साधन हुनेछ।”
चीन, यूएई र यूकेसहित विश्वभरिका सरकारहरू क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बल गरिरहेका छन्।
क्रिप्टोकरेन्सी ट्र्याकिङका कारण केही ठूला गिरफ्तारीहरू पनि गरिएको छ।
त्यस्ता कारबाहीमध्ये अमेरिकी किशोर ग्राहम इभान क्लार्क पक्राउ परेको घटना पनि पर्छ। अहिले जेलमा रहेका उनी हालसम्मकै ठूलोमध्येको एउटा सामाजिक सञ्जाल ह्याकिङको मुख्य योजनाकार थिए।
उनले किम कार्दशिन, एलन मस्क, बिल गेट्स र जो बाइडनलगायतका ट्विटर खाताहरूसम्म पुग्ने एउटा उपाय पत्ता लगाएका थिए। क्लार्क र उनको ह्याकर समूहले क्रिप्टोकरेन्सी स्क्यामका लागि एउटा विज्ञापन गरेको थियो।
नक्कली गेटवेबाट सर्वसाधारणबाट रकम प्राप्त गर्ने आशाका साथ उनीहरूले यस्तो विज्ञापन गरेका थिए। केही घण्टाभित्रै क्लार्कले एक लाख डलर बनाएका थिए र आफ्ना लुकाइएका बाटाहरूमा रकम स्थानान्तरण गर्न थालेका थिए।
तर त्यसले काम गरेन। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले उनीमाथि लगाइएको अभियोगमा अधिकारीहरूले “ब्लकचेनको सफलतापूर्वक विश्लेषण गरिएको तर अज्ञात बिटकोइन कारोबारलाई पत्ता लगाएको” उल्लेख छ।
क्लार्क अहिले १८ वर्षका भए। दोषी ठहर भएपछि उनी फ्लोरिडाको जेलमा छन्। अधिकारीहरूलाई चिन्तित बनाएको अर्को कुरा भनेको कथित ‘प्राइभेसी कोइन’ अर्थात् गोप्य सिक्काको बढ्दो प्रयोग हो।
ती मोनेरो र एक्सआरपीजस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरू हुन्। उनीहरूले बिटकोइनभन्दा पनि बढी मात्रामा गुप्त रहने सुविधा दिन्छन्। जबरजस्ती पैसा मागिएका केही मामिलामा ह्याकरहरूले पीडितहरूलाई छुट पाउने भए ती कोइनहरूमा भुक्तानी गर्न भनेका छन्।
गणेशमान सिंहको २४ औँ स्मृति दिवस मनाइदै